आचारसंहिता पछि निर्वाचन आयोगलाई मन्त्रीहरुको प्रश्न- श्रीमती र छोराछोरीलाई भेट्न पनि नपाउने ? - SangaloKhabar
आचारसंहिता पछि निर्वाचन आयोगलाई मन्त्रीहरुको प्रश्न- श्रीमती र छोराछोरीलाई भेट्न पनि नपाउने ?
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन प्रचारप्रसारमा जान नपाउने आचारसंहिता लागू गरेपछि मन्त्रीहरू असन्तुष्ट भएका छन् । आयोगले बुधबार गरेको छलफलमा मन्त्रीहरूले राजनीतिक दायित्व बन्देज गर्न खोजिएको आरोप लगाएका हुन् ।
निर्वाचनमा दुईवटा गाडी मात्रै प्रयोग गर्न पाउने आचारसंहिता जारी गरेकोमा पनि मन्त्रीहरूको असन्तुष्टि छ । आचारसंहिता लागू भएपछि जिल्ला सदरमुकामभन्दा बाहिर जान नपाउने व्यवस्थाप्रति पनि उनीहरूले असहमति जनाएका छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, फाल्गुण १९, २०७३ समय: ८:२५:२७